Michael (horonantsary, 2011)
Batisa ho anny maty
Fiteny ao Roanda
Ny Vavak i Azariasa sy ny Tonon-kiran ireo Zatovolahy telo ao anaty afo
Sivàna (volana hebreo)
Kisleva (volana hebreo)
Teveta (volana hebreo)
Tamoza (volana hebreo)
Ava (volana hebreo)
Sevata (volana hebreo)
Elola (volana hebreo)
Adara (volana hebreo)
Tisry (volana hebreo)
Iara (volana hebreo)
Repoblika Entim-Bahoakan i Kôngô
Fiteny ao aminny Repoblika Demôkratikani Kôngô
Ady Lehibe Voalohany
Markiona avy any Sinopesy
Ny tazomoka dia aretina miteraka tazo mahery vokatry ny kaikitry ny vavinny moka atao hoe anôfela izay mamindra ilay zavamanana aina atao hoe plasmôdiôma izay mahatonga io aretina io.
Ny zaza menavava sy ny ankizy madinika no tena tratrany aminny ririnina. Ny tena lasibatra dia ireo zaza miara-tezaina aminny toerana iray toy eny aminny akany crèche, satria mifindra ny aretina.
Ny fanafody dia zavatra entina manasitrana na hiarovana aminny aretina ho anny olombelona sy ny biby, eny fa na ho anny zavamaniry koa aza. Misy karazany ny fanafody: natao hatelina, hosotroina, hahosotra, hatsindrona, hasisika ary hoevohana.
Ny virosy na viriosy dia zavamanana aina kitika izay fitambarana asidra nokleika voahodidina hodiny mafy vita aminny prôteinina, kantsentsitra mivelona anaty selan-javamanana aina, izay matetika miteraka aretina ho anilay zavamanana aina tsentsefiny.
I Kelimalaza na Ikelimalaza dia iray aminireo sampy roa ambinny folonny mpanjaka merina izay notehirizina tao Ambohimanambola hatraminny andron-Ralambo. Tapa-kazo roa natambatra hanana endrika V sady napetaka aminny tapa-dambamena sy nofonosina l ...
Ny mandravasarotra, izay atao hoe saro na sakarivohazo na fanalamangidy koa, dia zavamaniry voninkazo tsy hita afa-tsy eto Madagasikara. Atao hoe Cinnamosma fragrans ny anarany ara-tsiansa. Fanao fanafody ny mandravasarotra. Ny raviny no tena amp ...
Ny angatra dia mety midika zavatra maro: Karazana lolo, na fisehonny fanahinolo-maty. Angàtra dia biby mitovitovy aminny voalavo na ny abeny na ny sorany, nefa izy io manana ny maha izy azy eo aminny fiaina Aretina azo avy aminny firaisana ara-no ...
Ny gripa dia aretina mitranga matetika sy mora mifindra vokatry ny taonny otrikaretina ARN aminny fianankavianny Orthomyxoviridae mikasika ny vorona, sy ny biby mampinono toy ny kisoa sy ny olombelona.
I Ozia na Oziasa izay atao hoe koa Azaria na Azariasa dia mpanjakani Jodà, zanaki Amazia tamini Jekolia, izay nanjaka nandritra ny 52 taona teo antenantenanny taonjato faha-8 tal. J.K. Ao aminny Baiboly dia voalaza fa mpitari-tafika sady mpanjaka ...
Ny katsaka dia zavamaniry volena mba hahazoana voany izay atao sakafon’ ny olombelona sy ny biby fiompy, sy mba hahazoana ny raviny sy ny tahony hohahin’ ny biby fiompy. Isan’ ny zavamaniry be mpamboly maneran-tany, toy ny vary sy ny varimbazaha, ...
Ny Empira partiana, na Empira parta, izay atao hoe Empira arsakida, dia fanjakana iraniana natanjaka ara-politika sy ara-kolontsaina tao Persia taminny Andro Taloha, izay nisy teo anelanelan ny taona 247 tal. J.K. sy 224 taor. J.K. I Arsaka I, mp ...
Ny tempoly, araka ny foto-pampianaran ny Fiangonan i Jesoa Kristy ho anny Olomasinny Andro Farany dia trano atokana ho tranon ny Tompo sady heverin ny mpino ho toerana masina indrindra eto an-tany. Araka izany fampianarana izany dia nandidian And ...
Ny akoho dia vorona fiompy mpitsindroka iray karazana aminny vorombola sy ny vorontsiloza, somary bontolontolo vatana, fohifohy elatra, ompiana noho ny henany sy ny atodiny ary ny lahy dia ompiana mankana mba hampiadina na noho ny fanenony. Ny ak ...
I Noroeste Rio-Grandense dia iray aminireo faritra salasalany ao amin ny fanjakan i Rio Grande do Sul ao Brezily. Mahatratra 64 930 km2 ny velarany. izay ahitana mponina miisa 1 970 326 tamin ny taona 2005. Mifnefitra amin ny fanjakan i Santa Cat ...
Ny QIT - Fer et Titane, izay atao hoe koa Rio Tinto Fer et Titane, izay fantatra tany aloha taminny anarana hoe QIT dia orinasa kebekoazy, izay sampanny orinasa mpitrandraka iraisam-pirenena tao hoe Rio Tinto. Ny tena asa sahaniny dia ny fitrandr ...
Miankina be amin’ ny fitrandrahana harena an-kibon’ ny tany ny toekaren’ i Gabôna, indrindra ny solitany izay miantoka ny 50 %n’ ny PIB sy ny 80 %n’ ny vokatra aondrany. Na dia izany aza dia miaina ao anaty fahantrana ny 60 %n ny mponina noho ny ...
Ny QIT Madagascar Minerals dia orinasa kanadiana mpitrandraka harena an-kibonny tany ao Tôlagnaro ao aminny Faritra Anôsy any atsimo atsinanan i Madagasikara izay mitrandraka ilmenita, dia ilay ataonny Malagasy hoe "fasi-mainty". Ny hoe QIT dia f ...
I Amazônia dia faritra midadasika any Amerika Atsimo izay mivelatra avy any amin’ ireo lembalemban’ i Guyana hatrany amin’ ny tantavan-tendrombohitra Andy sy hatrany amin’ ny tapany avaratr’ i Brezily. I Amazônia dia ilay faritra tondrahan’ ony A ...
Ny fahaterahana dia ilay fotoana anombohanny fahavelomanny zavamananaina iray tsy miankina aminny reny na ny atody. Aminny ankapobeny dia ilay fotoana ivoahanny biby avy aminny kibon-dreniny aminny biby misy nono no atao hoe fahaterahana, na ilay ...
Ny jainisma na darma jaina dia fivavahana izay mampianatra fa ny tanjonny fiainana dia mitovy ho anny hindoisma sy ny bodisma ary ny sikisma. Ny mpanaraka io fivavahana io dia tokony hanao tanjona ny fahatratrarana ny fihazavana izay mitarika ami ...
Ny kalanoro dia zavamananaina mitovitovy aminny olona fa kely madinika sy fohy izay mivelona any anaty ala. Malaza ho mahay fanafody ny kalanoro. Ankehitriny dia inoanny olona fa azo tezaina ny kalanoro mba hampanan-karena.
Ny fôsily dia tavela, fiheverana, na fitadiavana zavamananaina taloha taminny vanim-potoana geolojika taloha.
Ny fanahinny vatana izay atao amin ny teny mahazatra hoe fanahy ihany koa dia fototry ny fahavelomana tsy azo tsapain-tanana, izay manetsika ny vatan ny zavamananaina sy mahatonga azy hanana saina. Maro dia maro ny fanehoana ara-tandindona na am- ...
Ny iazdanisma dia teny entinny mpikaroka eny aminny oniversite anondroana ny fivavahana monoteista taloha izay manao fanompoam-pivavahana aminny anjely, izay nataonny Korda talohanny niitaranny tany fehezinny Arabo taminny taonjato faha-7 sy ny f ...
Ny kokolampo na koko dia zavamananaina mitovitovy amin ny olona, karazan ny kalanoro. Mety ho tsara fanahy na ho ratsy fanahy ny kokolampo. Tsy hita maso ny kokolampo nefa hita ny asany sy ny vokatr izany. Tiany ny miompy akoho mainty na osy main ...
Ny animisma dia finoana ny fananan ny zavatra rehetra fanahy sy aina, ka tsy ny zavamananaina ihany izany fa ny zavatra hafa toy ny hazo, ny rivotra, sns. Inoana koa ao amin ny animisma ny fisian ny fanahy maro tsy hita maso izay mpiaro. Avy amin ...
Ny Nefilima dia karazanolona voalaza ao aminny Baiboly, vokatry ny firaisanny "zanakAndriamanitra" taminireo zanakavavinny olombelona. Ny rainny nefilima dia hevirinny maro fa anjely nikomy aminAndriamanitra. Taminny fisiany teto an-tany dia nito ...
I Satana na ny satana dia zava-mananaina ara-panahy tany an-danitra izay resahina ao amin ny fivavahana abrahamika sady voalaza fa nanohitra ny sitrapon Andriamanitra ka nitarika fanahy maro hafa koa hanaraka azy mba haka fanahy ny olombelona ka ...
Ny anjely, araka ny fivavahana sy fedrà maro, dia zava-mananaina any an-danitra, izay irahinAndriamanitra ho mpanelanelana azy sy ny olona ety amboninny tany sady ho mpampita ny hafatra sy ny sitraponAndriamanitra aminny olona. Mety hampianatra, ...
Ny FanjakanAndriamanitra na Fanjakanny Lanitra dia hita ao aminireo fivavahana abrahamika, indrindra ny Jodaisma sy ny Kristianisma, izay mahakasika ny resaka momba ny andro farany. Ao aminny fivavahana kristiana, araka ny hita ao amin ny Testame ...
Ny IEEE anny 802.11 dia ny fianakaviana ny fitsipiky ny IEEE ho wireless faritra an-toerana ny tambajotra efa toy ny tanjona mba hanitatra ny 802.3 ho aminny wireless faritra. Ny fitsipika anny 802.11 dia matetika fantatra aminny anarana hoe "WiF ...
Ny f ahagagana nataoni Jesoa dia ireo zava-niseho tsy araka ny lalànanny natiora izay notanterahini Jesoa araka ny Testamenta Vaovao. Araka ny voasoratra ao aminireo Evanjely dia nanao fahagagana i Jesoa ka nitana toerana lehibe izany. Nisy fanas ...
Ny Evanjely arabonny Fahazazana izay fantatra ihany koa aminny anarana hoe Evanjely siriakanny Fahazazana na Fiainani Jesoa aminny fiteny arabo dia boky apokrifa kristiana mitantara ny fahaterahana sy ny fahazazani Jesoa izay ahitana zava-mahagag ...
I Aarôna na Aharôna na Arona dia olona resahina ao amin’ ny Baiboly, indrindra ao amin’ ny Testamenta Taloha ao amin’ ny Bokin’ny Eksodosy sy ny Levitikosy ary ny Nomery. Nanampy an’ i Mosesy tamin’ ny fanafahana ny Zanak’i Israely tamin’ ny fana ...
Ny Filazantsara na Evanjely na Vaovao Mahafaly dia fitambaranny boky efatra) hita ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly, natokana hizaràna aminny olona rehetra ny momba ny FanjakanAndriamanitra sy i Jesoa Kristy. Ny Kristiana dia mamaky s ...
Ny Farihy Tiberiada na Farihy Tiberiasy na Ranomasina Galilia na Farihy Genesareta na Farihy Jenezareta na Farihy Kinereta dia farihin-dranomamy ao avaratra-atsinanani Israely izay vakivakinny ony Jordana. Be trondro io farihy io sady malaza koa ...
Ny Filazantsara araka ani Joany, na Evanjely araka ani Masindahy Joany na Vaovao Mahafaly araka ani Masindahy Joany na Filazantsara araka ani Jaona na Vaovao Mahafaly araka ani Jaona dia Filazantsara na Evanjely fahefatry ny Testamenta Vaovao ao ...
Ny Evanjelini Pseodô-Matio dia soratra apokrifa kristiana voasoratra teo anelanelanny taona 600 sy 625. Io evanjely io dia fantatra ihany koa aminny anarana hoe: Evanjelinny Fahazazana araka ani Matio na Boky ny aminny Fahaterahani Maria Voatahy ...
I Joany na Jaona na Jôhany dia isanireo mpianatri Jesoa roa ambinny folo lahy. Atao hoe Joany zanaki Zebedio koa izy sady rahalahini Jakoba zanaki Zebedio. Mpanjono ny asany. Misy ny mpandinika mihevitra fa i Joany apostoly dia tsy iza fa i Joany ...
Ny Asani Tomasy dia soratra kristiana taminny andro taloha izay mitantara ny dia fanatanterahana iraka nataonny apostoly Tomasy tany aminny fanjakana indo-partani Taksila. Soratra apokrifa mitatitra ny fianinani Tomasy nanomboka aminny fotoana na ...
I Galilea na Galilia dia faritra ao aminny tapany avaratri Israely, izay eo anelanelanny Ranomasina Mediteranea ao andrefana sy i Siria ao avaratra ary ny lemaki Esdrelona ao atsimo.
Ny angady dia fitaovanny mpiasa tany izay ampiasainy hamadibadihana sy hampahalemy ny nofon-tany ao aminny velarana kely. Ampiasaina mba hampahalemy ny tany mety mahatratra any aminny 35 sm aminny famadibadihana ny nofon-tany. Ny angady dia misy ...
Ny Andronny Vy dia vanimpotoana miavaka noho ny fahefehezanny olombelona ny fanefena vy, izay nandimby ny Andronny Alimo. Miovaova be ihany anefa ny fari-potoanny Andronny Vy arakaraka ny faritra eto an-tany sy ny faritra misy ny kolontsaina resa ...
Ny Vy Vato Sakelika dia fikambanana miafina malagasy naorina mpianatra mpitsabo maromaro taminny taona 1913 hanetsika ny fitiavan-tanindrazana. Nenjehinny fahefana mpanjana-tany frantsay ny fikambanana taminny taona 1915. Niisa 223 no voasambotra ...
Ny Tafondro dia fitaovam-piadiana vita fantsona vy matevina. Izy io dia natao hanipy bala mavesatra: bola vato, vy na vy anidina Ny tafondro dia fitaovam-piadiana nampasaina hatry ny taonjato faha efatra ambinny folo. Ny tanjonizy io matetika dia ...
Ravoahangy-Andrianavalona Joseph dia mpitari-tolona malagasy, niady tamin ny fanjanahantany, anisan ireo namorona ny antoko Vy Vato Sakelika sy Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache
Ny tetezana dia rafitra, hazo, vato na vy atao hampitohy ny laniny roa aminny hady na renirano iray. Rafitra handinganana lalana ihany koa izy io rehefa tsy tiana hifanapaka ny lalana roa: ny lalamby. Ny fivoaranny teknôlôjianny tetezana dia mety ...
Ny Fanjakani Jodà na Fanjakani Joda na Fanjakana Atsimo dia fanjaka-mpanjaka tany Atsinanana-Akaiky taloha naorinny Israelita taminny Andronny Vy. Araka ny Baiboly dia teo anelanelanny taona 931 sy 586 tal. J.K. no nisianio fanjakana io izay nifa ...
Lawrence Mark Sanger, na antsoina hoe Larry Sanger. Izy dia tera-tany Amerikana manana diplôma aminny filozofia sady anisany angady nananana sy vy nahita ny raki-pahalalana wikipedia voalohany.
Ny tafika an-tanety, na tafika, dia iray aminny antokom-piarovana mitam-piadiana ao aminny firenena iray, izay miady an-tanety indrindraindrindra. Ny olona any aminny tafika dia antsoina hoe miaramila. Ny tafika an-tanety fia mety hotaterina amin ...
Ny Vavak i Azariasa sy ny Tonon-kiran ..
Fiteny ao aminny Repoblika Demôkratik ..